Indlu yomlinganiswa eLa Chapelle d'Angillon.
La Chapelle-d'Angillon, Centre-Val de Loire, France
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguFrançoise
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uFrançoise iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Kwindlu yenkulungwane ye-16, eyamkelekileyo kwaye ikhululekile, esembindini welali, kunokwenzeka ukuba ubhukishe indawo yokulala eyi-1 ukuya kweye-3 (jonga izibhengezo zam ezikhethekileyo nganye yazo: "Igumbi eliBomvu", "Igumbi leTaupe" kunye neGumbi elikhulu eliMhlophe ") okanye indawo yonke xa kuyimfuneko (iimeko ngesicelo kwaye kuxhomekeke kwinani labantu). ukuba ufuna kuphela igumbi omnye, incwadi zenzeke isaziso ngalo ukwenzela ukunqanda uvimba le khalenda indlu yonke.
Indawo yokuhlala ebanzi kumanqanaba ama-3 (izinyuko) anentendelezo yangaphandle, ezolileyo kwaye imnandi, kufutshane nazo zonke iivenkile ezikwilali encinci yaseBerry. Umlambo, echibini kunye nenqaba yokuhamba kwelizwe 2 imizuzu yokuhamba. Ibha-cuba, indawo yokubhaka, ivenkile yokutya kunye nePosi ekufutshane. Ithuba lokugcinwa kwegumbi okanye indawo yonke yokuhlala (iya kuchazwa ngenxa yokuba ixabiso lihluke kancinane). Ixabiso elipapashiweyo lelabhedi ephindwe kabini (i-1 okanye abantu aba-2). Bala i-euro ezingama-20 ngomntu owongezelelweyo kumagumbi aneendawo ezi-3 (i-10 kumntwana). Ukubanakho ukongeza ibhedi eyongezelelweyo ekhululekileyo kwindawo yam yokusebenzela ebekwe kumgangatho we-2. Isidlo sakusasa ngesicelo (i-5 euros / pers). Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo likhona ukulungiselela ukutya (izithako zobuqu). Ipiyano, ithala leencwadi labantu abadala, eyeyabantwana, imidlalo yebhodi kunye nezinto zokudlala ezahlukeneyo. Ii-euro ezili-15 ngeendleko zokucoca.
1 ibhedi elala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
4.79 out of 5 stars from 63 reviews
4.79 · Izimvo eziyi-63
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi63
Ilali encinci ethandekayo nenoxolo kumbindi weFransi (Cher) apho u-Alain Fournier wazalelwa khona (imyuziyam yokutyelela).
Ukuhamba malunga nemizuzu ye-45, malunga ne-echibini kunye nomda womlambo omncinci, kunye nombono wenqaba (ukutyelela), ufikeleleke kwimizuzu emi-2 ukusuka kwindlu.
Ifumaneka kwimizuzu eli-15 kude, i-LA BORNE, ilali yababumbi, eneziko layo le-ceramic langoku. Imizuzu engama-35 ukusuka eSancerre kunye nemizuzu engama-30 ukusuka eBourges.
Umbuki zindwendwe ngu- Françoise
Zikhona endlwini ukuba irenti inxalenye. Ukungabikho kodwa kuyafumaneka ukwamkelwa kunye nokuhamba, ukuba irenti yendawo yonke yokulala.
Ndingathanda ukuphawula ukuba le ndawo yokuhlala yindawo yam yokuhlala kwaye ke ngoko uya kuzifumana uphakathi kwezinto zam zobuqu kwaye hayi njengasehotele okanye kwindawo engeyiyo eyenzelwe nje "ishishini". Ingqikelelo inokuthi "ukwamkela ummi".
Ndingathanda ukuphawula ukuba le ndawo…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$566